Macallin Arsene Wenger oo magacaabay labada Kooxood ee midkood ku guuleysan doonta Champions League xilli ciyaareedkan – Gool FM
Haaruun August 3, 2020
(Yurub) 03 Agoosto 2020. Macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arsene Wenger ayaa magacaabay labada Naadi ee midkood ku guuleysan doonta tartanka Champions League kal ciyaareedkan kuwaasoo uu u arko inay yihiin kuwa ugu cad-cad ee hanashada koobka horyaallada Yurub.
Koobka horyallada Yurub ee UEFA Champions League ayaa Jimcaha dib u bilaabanaya kaddib markii uu hakad galay bishii Maarso waxaana lagu daah rogi doonaa dib u soo laabashadiisa kulanka adag Manchester City ay garoonkeeda Etihad ku qaabilayso Real Madrid lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League.
Sabtida iyo Jimcaha marka la ciyaaro kulammada ka haray wareegga 16-ka Koobka horyallada Yurub, waxaa siddeedda kooxood ee isugu soo haray afar ka mid ah haatanba la sii ogyahay inay u duuli donaan Waddanka Portugal, halkaasoo lagu ciyaari doono wareegyada tartankan ka haray ee siddeed dhammaadka, afar dhammaadka iyo Final-ka.
Bishaan Agoosto marka ay 23 mareyso ayaa kulanka kama dambeysta ah la ciyaari doonaa, waxaana hoggaamiyihii hore ee Gunners Arsene Wenger uu sii daadaaliyey labada kooxood ee ugu cad-cad hanashada tartankan kuwaasoo midkood ay ku guuleysan doonto Champions League bishaan.
Inkastoo ay haatan tartanka qeyb ka yihiin kooxaha waa weyn ee Juventus, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea iy Atletico Madrid haddana Arsene Wenger waxa uu qabaa in Kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain ay yihiin labada kooxood ee ugu cad cad oo midkood ay ku guuleysan doonto Koobka horyallada Yurub.
“Waxaan u malaynayaa in hoos u dhac uu ku yimid heerkii kooxaha Yurub ee aad iyo aad u heer sarreeyey, waxaana jira labo ama saddex ugu wanaagsan Yurub” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Wenger.
“Anigu haddii aan fikirkeyga dhiibto Manchester City iyo Paris Saint-Germain ayaa ah labada kooxood ee ugu cad-cad ku guuleysiga Champions League.” ayuu hadalka ku daray hoggaamiyaha reer France.
Haddii aan eegno labada kooxood ee Wenger uu saadaaliyey in midkood ay hanan doonto Champions League, Man City ayaa haysta faa’iido lugtii hore ee 16-ka ay Real Madrid kaga soo adkaatay Santiago Bernabeu 2-1, waxaana kulankan ay u baahan yihiin inay Los Blancos ku reebaan garoonkooda Etihad, halka naadiga PSG ay iska xaadirisay wareegga siddeed dhammaadka Champions League kaddib markii ay tartanka ka soo reebeen naadiga reer Jarmal ee Borussia Dortmund.